ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): October 2012
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:22 PM 1 comment:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 3:44 AM No comments:
မိုဘိုင်းမျိုးစုံ Root လုပ်နည်းနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ (Ebook)
Labels: Android, Ebook, Phone, Root
Kaspersky ချစ်သူများအတွက် PC မှာ သုံးတာ အားမရလို့ Android Phone တွေမှာပါ
အသုံးပြုဖို့အတွက် Kaspersky.Mobile.Security.v9.10.129 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ နောက်
ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Version လေးပါဘဲ။ အရင်ကလည်း တစ်ခုတင်ပေးထားဖူးပါတယ်။ Kaspersky
ဆိုတော့ Virus ပြသာနာမှာ ယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဖုန်းလည်း အရင် က AVG သုံးတာ
အခု Kaspersky ကိုပြောင်းသုံးကြည့်နေတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:23 PM No comments:
Labels: Android, Android Application, Antivirus, Phone
Android Phone တွေအတွက် Camera Zoom Fx ဆိုတဲ့ Application လေးတစ်ခုတင်
ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ပုံမှန်အားဖြင့် Android Phone တွေမှာ Camera ပါရှိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် Zoom
ဆွဲပြီး ရိုက်လို့မရပါဘူး။ အခု Camera Zoom ကတော့ Zoom ဆွဲပြီးရိုက်လို့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ပုံမှန်
Camera ထက် နည်းနည်းလေး ရုပ်ထွက်ပိုကြည်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ် ရိုက်ရုံနဲ့ ဓါတ်ပုံ9ပုံ 10 ပုံ ထွက်လာ
အောင် ရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်။ အခြားသော Function တွေလည်ပါဝင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်တိုက်ကလိကြည့်
လိုက်ရင် Function တွေအများကြီး ပိုသိလာမှာပါ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:36 PM No comments:
Issue Date IJMain Mobile Education Electronic TechInside
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:56 AM No comments:
နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဂျာနယ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်ဆိုဒ်မှာ အပတ်စဉ်တင်သွားပေးပါ့ မယ်ဗျာ။နောက်အပတ်များမှာလည်း အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း တင်ပေးသွားပါ့မယ်ဗျာ။ အခုအပတ်မှာ Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-76 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 29 ရက်နေ့ထွက် Update
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:03 PM No comments:
Digital Life Journal အတွဲ-၁၊ အမှတ် - ၂၆ (29.Oct.2012)
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:30 PM No comments:
Labels: Digital Life Journal
Web Browser တွေထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ Mozill Firefox
ကနေ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Web Browser လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ PC အတွက်
ရော Android Phone အတွက်ပါ Version တွေပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ မူရင်း Download Link ကိုဘဲပေးထားပါ
တယ်ဗျာ။ မိမိလိုချင်တဲ့ Version ကိုရွေးချယ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 3:58 AM No comments:
Total Uninstall Professional Edition v6.2.1 + Serial Key
munghpan: ကိုပြည့်ရယ်...your uninstallers software ကောင်းကောင်းလေး တစ်ခုလောက်တင်ပေးပါအုံးနော် ..စောင့်နေပါ့မယ်နော်
ကျွန်တော်လည်း Uninstaller ကောင်းကောင်းတစ်ခုရထားတာ တင်မလို့ပါဘဲ။ Cboxမှာ
တောင်းထားတာနဲ့ ဆုံသွားတော့ မြန်မြန်လေးဘဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ တချို့ Software တွေက
Control Panel ထဲက Add or Remove နဲ့ Uninstall လုပ်ရင် တချို့ Softwarတွေက Uninstall လုပ်လို့
အဆင်မပြေပါဘူး။ Uninstall Software နဲ့ Remove လုပ်မယ်ဆိုရင် လက်စလက်နတောင် မကျန်ပါဘူး
ဗျာ။ ကျွန်တော်တင်ပေးနေကျပုံစံအတိုင်းဘဲ Full Version လေးတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ နောက်ဆုံးထွက်
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:09 PM 1 comment:
ဝေဖြိုး: HUAWEI 8836D အတွက် Root လုပ်နည်းနဲ့ မြန်မာ font ထည့်နည်းလေး တင်ပေးပါဦး။ ကျေးဇူးပါ။
Cbox မှာ ကိုဝေဖြိုးတောင်းထားလို့ အခြားလိုအပ်သောသူငယ်ချင်းများလည်း အဆင်ပြေ
သွားအောင် တဆင့်ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တေ်ာ Root ဖောက်တာသိပ်မကျွမ်းပါဘူး
ပြီးတော့ Screen Shoot တွေရိုက်ပြီးစာတွေရေး ပြန်ရှင်းပြရမှာ ပျင်းစိတ်ကလေးဝင်နေတာနဲ့ ဘဲ ရှာ
ကဲ Huawei ကတော့နောက်အသစ်တစ်ခုထပ်လုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီ….
ဒီကောင်လေးကတော့ Unlock Bootloader လုပ်စရာမလိုတော့ Root လုပ်ရတာမကြာတော့ဘူးပေါ့….
U8825D C8825D တို့ကတော့ စာတွေတင်ပြီး၂ရက်လောက်စောင့်ရတာစိတ်ပျက်စရာပါ။
Root လုပ်ဖို့ကတော့ ဒီ ဖိုင်လေးတစ်ခုပဲ လိုတာပဲ။
Driver ကတော့ ရှိကျမှာပါ။
ပြီးရင်တော့ Extract လုပ်လိုက်ပါ။
USB Debugging နဲ့ Unknown Source ကိုအမှန်ခြစ်ဖို့မမေ့နဲ့အုံးနော်…
ဒီအတိုင်း Normal Mode မှာတင်ကြိုးထိုးရမှာနော်….
ပြီးရင်တောါ RunMe.bat ကို Run လိုက်ပါ။
3 ကိုနှိပ်ပြီး Enter တစ်ချက်ခေါက်လောက်ပါ။
Restore my data ကိုရွေးလိုက်ပါ။
အပေါ်က Password တွေကိုဂရုစိုက်မနေနဲ့နော်….
ပြီးရင်ဖုန်းက Power Off ကျသွားပါလိမ့်မယ်…
ပြီးရင်တော့ Reboot တစ်ခါကျသွားပြီး Super User Icon လေးကိုမြင်ရမှာပါ။
Credit to - ဖြိုးချမ်း - http://www.myanmarmobileapp.com/?p=17176
အခွေကူးတဲ့နေရာမှာ လူတိုင်းအသုံးများဆုံး Software ကတော့ Nero ဖြစ်ပါတယ်။ အခု
Nero ကိုဘဲ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Nero Burning Rom v.12 ကို Portable လေးတင်ပေးလိုက်ပါ
တယ်ဗျာ။ Serial Key , တွေ Patch တွေ Crack တွေလိုဘူးနော်။ Activate ဖြစ်ပြီးသားပါ။ Nero ကတော့
လူတိုင်းသုံးတက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရှင်းမပြတော့ဘူးနော်။ အခုတလော Mediafire မှာတင်သမျှ File တွေ
အားလုံးအဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့ အတွက် Link သေသွားလို့ ဒေါင်းလို့မရသော Software များကို Comment
မှာချန်ပေးခဲ့ကြပါနော်။ ကျွန်တော် Link ပြန်ပြင်ပေးပါ့မယ်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 11:07 PM2comments:
ကွန်ပြူတာရဲ့ Hard Disk ကို Defragments လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Software တစ်မျိုးပါ။ အလွယ်
ဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ မလိုအပ်ဘဲ နေရာယူတဲ့ File တွေကို ပြန်စီပေးနိုင်ပါတယ်။ Hard
Disk မှာ နေရာလွတ်တွေရသွားတာပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ ကွန်ပြူတာကို ပိုမိုမြန်ဆန်လာအောင် စွမ်းဆောင်
ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကိုအောက်မှာ သေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ်ဗျာ။
အသုံးတည့်မယ့် Software တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ Link မသေခင်လေး
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 11:37 PM3comments:
ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး Converter ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ Format Factory ဘဲဗျာ။
Convert လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့ ပြောမနေနဲ့ ဗျာ File အမျိုးအစားတွေ တော်တော်ကြီးကိုများတယ်။
Convert လုပ်ပြီးသွား ရင်လည်း မူရင်း File ရဲ့ Quality အတိုင်းဘဲရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ File Size ကတော့ 50MB ရှိပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ Feature တွေကို မူရင်းဆိုဒ်ကနေယူပြီး အောက်မှာ အသေးစိတ်ရေးပေး
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 2:20 AM 1 comment:
iOS6Jailbreak ကို Redsn0w ၏ Devloper tool နှင့် Jailbreak လုပ်ပုံကို ကနဦး ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် Cydia ကို Manual Install လုပ်ကြရတဲ့ အတွက် Host File
ကို ကိုင်တွယ် အသုံးပြုရာမှာ အဆင်မပြေသူ တော်တော်များများ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခု အသစ်ထပ်မံထွက်ရှိ
လာတဲ့ Redsn0w 0.9.15b1 ကတော့ အရင် Jailbreak လုပ်တဲ့ ပုံစံအဆင့် အတိုင်း iOS6ကို လွယ်ကူစွာ Jailbreak လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်...
Redsn0w 0.9.15b1 ဟာ iPhone 4, iPhone 3GS, iPad 1 နှင့် iPodTouch 4G တို့ မှာသာ iOS6ကို Jailbreak ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်...
>> Redsn0w 0.9.15b1 ( Mac , Windows )
သင့် iDevice ကို PC နှင့် ချိပ်ဆက်ထားပြီး DFU mode သို့ ပြောင်းပါ။
DFU Mode ပြောင်းရန်
၁. iDevice ကို computer နဲ့ ချိပ်ဆက်ပါ။
၂. iDevice ကို Power OFF ပါ။
၃. Power + Home button ကို တွဲလျှက် ၁၀စက္ကန့်နှိပ်ထားပါ။
၄. Power button ကို လွှတ်လိုက်ပါ Home button ကိုတော့ PC မှ အချက်ပေးသံ ထွက်လာသည်အထိ ဆက်လက်ဖိထားပါ ( ၁၀စက္ကန့် မျှ)။ Black screen သာပေါ်နေပါမည်။
၅. အချိန်အနည်းငယ် အကြာမှာ iTunes က Device ကို Detect သိပါလိမ့်မည်။ (iTunes ကို ပိတ်ပစ်နိုင်ပါသည်)
Redsn0w 0.9.15b1 ကို Run လိုက်ပြီး "Jailbreak" button ကို နှိပ်ပါ။
“Please select your options” တွင် "Cydia" ကိုရွေးပြီး "Next" နှိပ်ပါ။ Jailbreak လုပ်နေပါပြီ အချိန်အားဖြင့် ၅မိနစ်ခန့်ကြာပါလိမ့်မည်။
Jailbreak လုပ်ပြီးသွားသော အခါ Home screen ကို ပြန်လည် ရောက်သွားပါမည်။ Cydia ကို မြင်ရဦးမည် မဟုတ်သေးပါ။ နောက်ထပ် တစ်ကြိမ် DFU Mode ပြန်ဝင်ပါဦး။
Redsn0w ၏ Main Page ကို ပြန်သွားပြီး ယခုတစ်ခါ "Extras" ကို နှိပ်ပြီး "Just boot" ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Tether boot ပြန်လုပ်ပြီးသွားပါက Home screen ကို ပြန်ရောက်သွားပြီး "Cydia" ကိုလည်း တွေ့ ရပါပြီ။
ဒါဆိုရင်တော့ iOS6 ကို Jailbreak လုပ်ခြင်း အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ....
ပြုလုပ်ပုံကို Video အဖြစ်လည်းလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
iOS6အတွက် မြန်မာကီးဘုတ်
Cydia ၏ Sources -> Edit -> Add -> http://cydia.macforus.com ကို သွင်းပြီး မြန်မာကီးဘုတ် ရယူပါ။
မူရင်း - မိုးသကြား
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:12 AM No comments:
ကွန်ပြူတာကို Maintenance လုပ်ရာမှာ အခုနောက်ပိုင်းလူကြိုက်များလာတဲ့ Software
လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Advanced System Care Pro v6.0.7.160 ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင်လည်း Serial Key လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ နောက်ဆုံးထွက် Version
လေးဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးပြီးသား Software ဖြစ်နေလို့ သူအကြောင်းတော့ မရှင်းပြတော့ပါဘူး
နော်။ Link မသေခင်လေးဒေါင်းယူထားကြပါဗျာ။
မရသေးရင် အောက်မှာ ထပ်ဒေါင်းဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:28 PM2comments:
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 3:37 AM No comments:
နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဂျာနယ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်ဆိုဒ်မှာ အပတ်စဉ်တင်သွားပေးပါ့ မယ်ဗျာ။နောက်အပတ်များမှာလည်း အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း တင်ပေးသွားပါ့မယ်ဗျာ။ အခုအပတ်မှာ Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-75 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 22 ရက်နေ့ထွက် Update